रेखाचित्र पट्टीले मुख्य रेखाचित्र उपकरणहरू राख्दछ ।
हालको कागजातमा तपाईँले तान्नु भएको टाउँमा भरिएको आयात कोर्दछ । तपाईँले जहाँ आयातको कुना राख्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको साइजमा तान्नुहोस् । वर्ग कोर्न, शिफ्ट दबाउनुहोस् जुनबेला तपाईँले तान्नुहुन्छ ।
हालको कागजातमा तपाईँले तान्नु भएको ठाउँमा भरिएको अण्डाकार कोर्दछ । तपाईँले जहाँ अण्डाकार कोर्न चाहनु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईँले चाहनु भएको आकारमा तान्नुहोस् । गोलाकार कोर्न शिफ्ट दबाउनुहोस् जुनबेला तपाईँले तान्नुहुन्छ ।
हालको कागजातमा तपाईँले जहाँ क्लिक गर्नु भएको वा तान्नु भएको छ त्यहाँ पाठ बाकस कोर्दछ । कागजातको कुनै पनि स्थानमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस् ।
रेखा र तीरहरू
रेखाहरू र तीर सम्मिलित गर्न तीर उपकरण पट्टी खोल्छ।
तपाईँको रेखाचित्रमा विन्दुहरू सम्पादन गर्नका लागि तपाईँलाई सक्षम गर्दछ ।
तपाईँको रेखाचित्रमा ग्लु विन्दहुरू सम्पादन गर्नका लागि तपाईँलाई सक्षम गर्दछ ।
चयन वस्तुलाई बेजियर बक्रमा रूपान्तर गर्नुहोस्
चयन वस्तु बहुभुजमा रूपान्तर गर्नुहोस् (बन्द वस्तु सिधा पङ्क्तिहरूद्वारा बाउन्ड गरिएको ). वस्तुको प्रस्तुति परिवर्तन हुँदैन. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ दायाँ-क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र छनौट गर्नुहोस् सम्पादन बिन्दुहरू परिवर्तनहरू हेर्नका लागि ।
चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि त्रि-आयामिक असर खुल्ला र बन्द स्विच गर्दछ ।